Lilian Garcia oo ka dhawaajisay iney isaga tagi doonto Shirkadda caanka ah ee WWE ga. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Maxaa Cusub » Lilian Garcia oo ka dhawaajisay iney isaga tagi doonto Shirkadda caanka ah ee WWE ga.
Lilian Garcia oo ka dhawaajisay iney isaga tagi doonto Shirkadda caanka ah ee WWE ga.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-08-16 2:42 PM Lilian Garcia ayaa ku dhawaaqday galabnimadii isniinta aheyd iney ka tagi doonto WWE, iyada oo ka dhawaajisay iney u go’i doonta xanaaneynta aabaheeda oo la dhibaatoonayo cudurka Cancer ka.
aabaha dhalay gabadhan ayaa la filayey iney xaaladiisa soo roonaato balse ma aysan noqon sidii laga filayey, waxa ayna ugu dambeyn ku qasabtay Lilian Garcia iney isaga harto shaqadii ay ka heysa shirkada ciyaaraha Musaaracada WWE ga.
Lilian Garcia waxa ay u mahad celisay Superstars ka WWE, sidoo kale waxa ay mahad balaaran usoo jeedisay dhamaan shaqaalaha kuwaas oo ay lasoo shaqeyneysay muddo ku dhawaad 15 sannadood.
“Idin ma dhahayo Macasalaama” ayey kusoo qortay boggeeda Twitter ka “iigu soo duceeya aabahey waxaan jeclahay inaan dhawaan isku soo laabano” ayey sidoo kale raacisay.